China Iphrinti Yethetile Yokuthengisa China Manufacturers & Suppliers & Factory
Iphrinti Yethetile Yokuthengisa - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 12 ye-Iphrinti Yethetile Yokuthengisa)
Iphrinta yethi yekhwalithi yekhwalithi ephezulu
Ukuze sivikele imvelo, uhulumeni nathi sizimisele ukusebenzisa umshini we-eco-friendly. Iphrinta yethu ihambelana naloluhlobo lweyinki. Okungafani nokushicilelwa kwe-Heat Transfer. The High Quality Textile Iphrinta iza CMYKW, ungasebenzisa le iphrinta ukuphrinta yonke imikhiqizo yendwangu. Kungaphrinta izithombe...
Iphrinti yeBhange le-Power Bank
Iphrinta ye-Power Bank Ungaphrinta isithombe nge-3d effect, isithombe singadlula iminyaka engaphezu kwengu-10, iwaranti ingu-3 iminyaka. Kungaphrinta ngokuzenzakalelayo kunoma iyiphi impahla, akudingeki ukuthi usebenze. Yilokho okuthiwa iMishini Yokunyathelisa I-UV , xhumana nami ngenani nama-infos namavidiyo...
Iphrinti yekhofi yekhekhe yekhekhe
Umshini wephrinta we- T-shirt , i-logo noma izithombe ezanyatheliswa ngqo ngengubo, ihembe, ifulegi, indwangu, izicathulo, izingubo kanye neminye imikhiqizo ehlobene. I-TT shirt ye-Dtg A3 , ifika nombala o-6 noma umbala o-8, kuxhomeke kokukhetha kwakho. I-Digital T-shirt I-Printer Price izosetshenziselwa yonke indawo....
I-RFC R1390 ifoni yephrinta yecingo yokuthengisa
Ngenkampani ye-RFC Hambayo Case Printer ungakwazi ukufaka umbala futhi uhambise ihhovisi lakho nezindawo zenkampani. Ungaphrinta ku-phne case, ukukhiqiza ngokuqondile efonini / shell / cell, noma yikuphi izithombe ze-digital, logo, brand, ebhaliwe, ukudweba, isignali, njll nokuthuthukisa nokwenza izikhala zebhizinisi...
I-hottest yokuthengisa ephezulu kunazo zonke i-Printer Inkjet
Iphrinta ye-Inkjet ye-CD yamukela uhlelo lokulawula ikhomputha ye-multi-axis. I-Printer ye-Industrial Industrial ixhunywe kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, njenge: landscape, uhlamvu, imidwebo yendabuko yaseChina, imidwebo yamafutha, ikhalligraphy kanye...
I-Multifunction T-Shirt I-Printer yeThetile
I- Multifunction T-Shirt I-Textile Printe r , sisebenzisa ikhanda lokunyathelisa lokuqala le-Epson, i-DX5 R1390, senze isinqumo esiphezulu, yenza umbala ophrintiwe ufana nomunye owodwa. Sinefektri esisedolobheni laseShenzhen, iThe Textile Printer A3 Price ukuncintisana kakhulu. sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Le...
I-HotTho yokuthengisa i-DTG Yokuthenga i-Printer Flatbed
I-HotTech yokuthengisa i-DTG Shopping Bag yephrinta ephrintiwe, inqubo yokunyathelisa yezindleko eziphansi, ukukhiqizwa okuphezulu, ukulahla okuphansi, imikhiqizo ephezulu efinyelelekile ifinyeleleke ngempela! Ingaveza isithombe sombala wesithombe kunoma yikuphi okubonakalayo, okumibalabala, okugqoke ukugqoka,...
Iphrinti Yokudla Umshini Wokunyathelisa Umkhiqizo
Iphrinti yokudla Ikhekhe le-Chocolate le-Candy Inkinobho edlayo
Iphrinti Yethetile Yokuthengisa Iphrinti yeThetile Yokuthengisa Iphrinta ye-UV ethempelini yokuthengiswa Iphrinta ye-Flat Bag Yokuthenga Iphrinta yekhofi yokuthengisa Iphrinti yeThetile I-Printer Flatbed Flatbed Yokuthengisa Iphrinta Ekhethiwe Engazithengayo